Xildhibaanada iyo Suxufiyiinta oo lagu baarayo Xarunta Xalane Ee Ciidanka AMISOM(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Xildhibaanada iyo Suxufiyiinta oo lagu baarayo Xarunta Xalane Ee Ciidanka AMISOM(Daawo Sawirada)
Xildhibaanada Baarlamaanka Federalka Somaliya ayaa ku jira liiska baaritaanka Xubnaha ka qaybagalaya Doorashada Madaxweynaha dalka oo lagu baarayo xarunta Xalane ee ciidamada Midowga Afrika ee Amisom.
Sida ay soo sheegayaan Wariyaasheena ku sugan Xerada Xalane ee doorashada ka qaybgalaya Baaritaan adag ayaa dhamaan xubnaha galaya xarunta doorashada lagu marsiinaya Xerada Xalane, kadibna waxaa loo qaadayaa xarunta doorashada ay ka dhaceyso ee dhabarka dambe ee Xarunta ciidamada Cirka ee Afisiyooni.
Suxufiyiinta iyo Xildhibaanada ayaa ku jira liis dheer oo istaag ah, halkaasi oo mid kasta lagu baarayo, kadibna loo gudbinaayo basas meesha taagan oo qaadaya dadka, geynayana xarunta doorashada.
Saacadihii ugu dambeeyay doorashada Somaliya ayaa lagu guda jiraa, waxaana la filayaa in goor dhaw doorashada si rasmi ah uga bilaabato xarunta loogu talo galay.
Ammaanka guud ahaan Magaalada Muqdisho ayaa ah mid aad loo adkeeyay, dadkuna waxa ay dhagta ku hayaan Warbaahinta maqalka, kuwa lugeynaya, halka kuwa guryaha jooga intii heli kartana ay daawanayaan Tv-yada.
Saacadaha soo socda Somaliya waxaa loo rajeynayaa inuu u dhasho Madaxweyne cusub oo hogaamin doona Afarta sano ee soo socota.
Inta badan Musharaxiinta iyo Wakiilada Beesha Caalamka oo gaaray Hoolka doorashada
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo saacadaha soo socda ka dhaceysa Muqdisho
Waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay doorashada afar kursi oo ka hartay kuraasta Aqalka Sare ee lagu dooranayay Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Labo kursi oo ka mid ah kuraasta maanta loo tartamayay ayaa waxaa ay gaar u ahaayeen dumar halka labada kalana ay ahaayeen rag.
Xasan Daahir Yarow iyo Cabdi Xuseen Cali ayaa ku tartamay kursiga ugu horeyay, waxaana ku guuleystay Senator Xasan Daahir Yarow oo helay 59 Cod.
Kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamay Ibraahim Awgaab Cismaan iyo Farxiyo Macalinta Cabdi, waxaan kursiga Aqalka Sars kusoo baxay Ibraahim Awgaab Cismaan oo helay 57 Cod.
Kursiga Saddexaad ee doorashada Aqalka Sare ayaa waxaa ku tartamay leyla Nuur Maax iyo Xareedo Maxamed, waxaana kursiga ku guuleysatay leylo Nuur Maax oo heshay 63 Cod halka Xareedo Maxamed oo la tartameysay ay heshay 9 Cod.
Kursiga ugu dambeeya ee doorashada Aqalka Sare ee Jubbaland ayaa waxaa ku tartamay Maryan Faarax Kadiye iyo Samsam Maxamed Bishaar, waxaana kursiga Aqalka Sare ku guuleysatay Maryan Faarax Kadiye oo heshay 50 Cod.
Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa noqday maamulkii Afaraad ee soo geba-gabeeya doorashada Aqalka Sare, waxaa la rajeynayaa in dhawaan Maamulka Galmudug lagu soo doorto labada kursi ee uga harsan Aqalka Sare.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Wasiirka amniga Xukuumadda Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Taliyaha KMG ee Hay’adda NISA Bashiir Goobe ayaa kulan ku yeeshay Xarunta Madaxtooyada
Warar ayaa sheegaya in kulanka looga hadlay khilaafka xoogan ee u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo salka ku haaya kiiska Ikraan Tahliil iyo awoodaha dhanka sharciga ah.
Kulanka dhexmaraya Farmaajo, Wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Taliye Bashiir Goobe oo uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa goobjoog ka ah Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasii Xasan Maxamed Lafta-gareen.
Kulankan ayaa ah kii u horreeyay ee fool ka fool ah oo Madaxweyne Farmaajo iyo Wasiirka Amniga C/llaahi Maxamed Nuur ay yeeshaan, tan iyo markii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si adag u diiday magacaabistii Wasiir C/llaahi.
Xalay aheyd markii Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble kulan ku yeesheen Xarunta Madaxtooyada, kaasi oo ahaa mid hordhac iyo is-wareysi ah, wuxuuna uu ku yimid dadaalo kala duwan oo uu sameeyay Madaxweyne Cabdicaiis Lafta-gareen.
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa xalay kulan ku yeeshay Madaxtooyada Qaranka kadib khilaaf soo jiitamayay labadii bilood ee la soo dhaafay.
Kulankan ayaa ka dhashay dadaalo uu waday labadii cisho ee la soo dhaafay Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen.
Isu imaatinkaan ayaa ah kii u horreeyay ee Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble ee ay yeesheen kaddib wada hadaladii fashilmay ee bishii hore.
Kulankan ayaa ahaa mid xalinayay khilaafkii sababay kala jabka NISA iyo shaqo ka eryintii Taliyihii hore NISA Fahad Yaasiin ee ka dhalatay kiiskii dilkii Ikraan.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kulanka ahaa mid hordhac oo salaan iyo sheekeysi, waxaana lagu balamay in caawa kulan kale la isugu yimaado, si loo dhammeystiro waxyaabaha haray ee labada dhinac u dhaxeeyay.
Ilo wareedyo ku dhow kulanka xalay ayaa ii sheegay in kulanka xalay intiisa badan ahaa mid la isku laab furay, kana muuqatay is faham iyo isu soo dhowaansho, ayna rajo ka qabaan in caawa inta dhiman is afgarad buuxa laga gaaro.